ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းများ - ဗိသုကာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစျေးနှုန်း - Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစတူဒီယို, ဗိသုကာ, ဒီဇိုင်နာ, စီးပွားရေး, ဒီဇိုင်း, စျေးနှုန်းများ
Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစတူဒီယို, ဗိသုကာ, ဒီဇိုင်နာ, စီးပွားရေး, ဒီဇိုင်း, စျေးနှုန်းများ
Homeန်ဆောင်မှုများအစုစုလူနေအိမ် -Portofoliuစီးပွားဖြစ် -Portofoliuကုန်ပစ္စည်းများပုံစံ-Design အတွင်း၌အိမ်များပြည်ထဲရေး -Design Villas-Design အတွင်းပိုင်းတိုက်ခန်းများအတွင်းပိုင်း -Amenajari-Design အတွင်းပိုင်းလူနေမှုပြည်ထဲရေး -Design စျေးနှုန်းများထိတှေ့ဘူခါရက် -ContactConstanta -Contact
ပြည်ထဲရေး Bacau အတွက်ခေတ်မီအိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေး Suceava အတွက်ဂန္အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးဂန္အိမ်သူအိမ်သား Craiova ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးကြမ်းပြင် Constanta နှင့်အတူခေတ်မီနေအိမ်ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးကြမ်းပြင် Urziceni နှင့်အတူခေတ်မီနေအိမ်ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးကြမ်းပြင် Ploiesti နှင့်အတူဂန္အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေး Pitesti အတွက်ဂန္စတိုင်အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေး Brasov အတွက်ဂန္အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးဂန္စားသောက်ဆိုင် Lounge ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးခေတ်သစ်အိမ်သူအိမ်သား Pipera ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးဂန္အိမ်သူအိမ်သား Targu Mures ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေး Braila အတွက်ဂန္အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးဂန္ဇိမ်ခံ villa Ialomita ဒီဇိုင်း
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်မူကြမ်းရေးဆွဲများ၏ concept ကိုအမြဲအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် stylist ဖြေရှင်းချက်၏ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ 2d ရေးဆွဲအစုတခုထဲမှာခံပြီးဖြစ်ပါတယ်, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်၏အုတ်မြစ်များနှင့်အောင်မြင်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်အကြာတွင်အလှဆင်ကြလိမ့်မည်။ ဤကဏ္ဍတွင် ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများ၏အသီးအသီးအဘို့ပစ္စည်းများအစုတခုများ၏ဖော်ပြချက်အထူးအာရုံကိုပေးဆောင်။ စာမျက်နှာအဆုံးမှာကျွန်တော်အိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းအတွက်ရွေးချယ်သူကိုဖောက်သည်အခွင့်အလမ်းများကိုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုသင့်လျော်သောအပြောင်းအလဲအပေါ်သတင်းအချက်အလက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ အစုစုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကိုစီမံကိန်းရွေးချယ်စတိုင်နှင့်ရှုပ်ထွေးပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများနှင့်အတူထပ်ခိုးကြမ်းပြင် Villas နှင့်အတူဂန္အိမ်များ။
ဗိသုကာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာ Gabriela Nechifor
လူနေအိမ် Portfolio - ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းနေအိမ်
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစျေးနှုန်း - န်ဆောင်မှုများအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းခေတ်သစ်ဂန္စတိုင်အိမ်များ
Studio ကတိုင်းအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း တင်းကြပ်စွာသတ်မှတ်ထားသောပိုင်ရှင်အညီဖန်တီးဗိသုကာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာများကမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်လိမ့်မည် (တိုက်ခန်းများ, အိမ်များခေတ်သစ်ဂန္စတိုင်, ရုံးများနှင့်မိသားစုနေအိမ်များ၏အခြားအမျိုးအစားများ။ ) ကနေ client များ၏တိကျသောဆန္ဒကိုနှင့်အညီပြုလုပ်စီမံကိန်းအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သောနှင့် ဆက်စပ်. အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများတွင်ဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ထို site ပေါ်တွင် 3d စပ်ကြီးကြပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတစ်ဦးစံနှုန်းကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် turnkey စီမံကိန်းကိုမှာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း။ ကျနော်တို့ Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းများနှင့်အိမ်များများအတွက်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကဖန်ဆင်းခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ် client နှင့်စီမံကိန်းအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်သေချာစေရန်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် posted ရှိရာမြေပုံစီမံကိန်းကိုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရှုပါ လက်လှမ်းနှင့်နားလည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဗိသုကာ, ဒီဇိုင်နာများ, စီမံကိန်းရေးဆွဲ။ မည်သို့ပင်သငျသညျအစပိုင်းတွင်ရှေးခယျြခဲ့သညျ့အတှကျအအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှု၏အမျိုးအစား, သငျသညျအပိုဆောင်းပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုအမိန့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒီဇိုင်း 3d အဖြစ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်၏လိုက်စား၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီ၏ပြီးပြည့်စုံသောထောက်ခံမှုပါဝင်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်ရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အတွင်းပိုင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု။ အဆိုပါအထင်ရှားဆုံးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်စီမံကိန်းများ၏စျေးနှုန်းကိုအခါ, သင် attach ။ တိုက်ခန်းများနှင့်စတုရန်းမီတာလျှင် 17-25 ယူရိုတစ်စတုရန်းမီတာလျှင်ပစ်မှတ်စျေးနှုန်း villa နေအိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို 25-40 ယူရို။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးသောဗိသုကာကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအထူးကု၏အခွန်ဘာလို့လဲဆိုတော့န်ဆောင်မှုများ၏သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများ၏နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲသည်ကို၎င်း, အဆုံးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို (မဖော်ပြသည့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းအယူအဆအားဖြင့်ရရှိနိုင်လုပ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ခြားနားချက် ) အနည်းဆုံးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအယူအဆအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရာအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသဘောပေါက်ခြင်းနှင့်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ Constanta, ဘူခါရက်, Brasov နှင့် Ploiesti အတွက်အိမ်တအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကိုအဘို့အ preturlui အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကိုအပြုသဘောသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်တွက်ချက်များအတွက်အဆိုပြုချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းစနစ်များ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဝယ်ယူစံဝန်ဆောင်မှုအပြင် execute ကြောင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကိုအိမ်များသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်န်ဆောင်မှု၏တန်ဖိုးစီမံကိန်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ရှုပ်ထွေးပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်သီးခြားစီအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအိမ်များအဘို့ဤအမျိုးအစားအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကိုဂန္ဇိမ်ခံထပ်ခိုးဇာတ်လမ်းအိမ်များနဲ့တူမြို့ကြီးများရှိစတုရန်းမီတာလျှင် 17-30 ယူရိုအကြားစျေးနှုန်းများမှာနိုင်ငံအနှံ့အဆောက်အဦးအမျိုးမျိုးဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေထဲပင်လယ်စတိုင်ခေတ်သစ် Villas ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် Bacau, Iasi, Suceava, Buzau, Craiova, Giurgiu, Focsani, Piatra Neamt, Braila, Tulcea နှင့်ဂလာတိ။
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းများ - ဗိသုကာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစျေးနှုန်း
ပြည်ထဲရေးဂန္အိမ်များ Constanta ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းမီးဖိုချောင်ဂန္အိမ်များ - Concept ကိုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း 3D
ဂန္စတိုင်ရာနှစ်ဆယ်ကိုမီးဖိုချောင်နှင့်အတူ Living အခန်းထဲမှာ
ပြည်ထဲရေးဘူခါရက်ထဲမှာခေတ်သစ် villa ဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေး | Living ဂန္အိမ်သူအိမ်သား Constanta
မီးဖိုချောင်ဂန္အတွင်းပိုင်း - အိပ်ခန်းဂန္ Landscaping
အိမ်များပြည်ထဲရေးဂန္ - ပြည်ထဲရေးဂန္ villa အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း
ပြည်ထဲရေးဂန္ဇိမ်ခံ villa ဒီဇိုင်း
စီမံကိန်းများဂန္စတိုင်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုအိမ်သူအိမ်သား။ စိတ်ကူးများနှင့်လှုံ့ဆော်မှု, ထပ်ခိုးကြမ်းပြင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်ဘူခါရက်, Ilfov, Constanta နှင့် Bacau အတွက်ခေတ်သစ်အိမ်များများအတွက်စီမံကိန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အများအပြား options များတွေ့ပါရန်။ သငျသညျအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စတိုင်တပြင်လုံးကိုအိမျတျောကိုပြန်စီရန်အစီအစဉ်ရှိပါကသို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာတိုက်ခန်း3သို့မဟုတ်4အခန်းပေါင်း repartitioning ချင်လျှင်, သင်ပဲ့ပြင်တော်မူလိမ့်မည်ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ input ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ Nobili ကုမ္ပဏီပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းအပေးအယူ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကို ကြမ်းပြင်တိုက်ခန်းများအဖြစ်ဟိုတယ်များ, စားသောက်ဆိုင်များ, ကဖေးများနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်နေရာများနှင့်အတူအိမ်တွင်းနေအိမ်များ။ 2008 ကတည်းကဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများအားလုံးသက်သာခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအဘို့, လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာ။ client ကိုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို အကြောင်းပြု. ဆန္ဒကိုဖော်ပြပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကအခန်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်တိုင်းအဆိုပြုချက်ကို 3D format ကိုနားလည်သဘောပေါက်။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများတွင်ထည့်သွင်းတစ်ခုချင်းစီပစ္စည်း, finish ကိုနှင့်ကို item အီတလီမှာထုတ်လုပ်သူများထံမှတင်သွင်းမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သာလွန်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီရွေးချယ်ဒီဇိုင်နာများ၏အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရေးအောက်မှာလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ဗိသုကာပညာရှင်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာ Gabriela Nechifor ကဒီဇိုင်းခံရဘူခါရက်, Constanta, Brasov နှင့် Ploiesti, ဂလာတိ, Braila, Tulcea အတွက်ခေတ်သစ်ထပ်အိမ်များတွင်ဂန္ Villas ထပ်ခိုးဘို့ပြီးစီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများတွင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းအတွင်းပိုင်း Villas အပေါငျးတို့သစတိုင်များခေတ်သစ်တိုက်ခန်းများအပါအဝင်ဂန္ဇိမ်ခံအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအိမ်များ, ပေးထားပါတယ်။ ဗိသုကာကုမ္ပဏီဘူခါရက်, Constanta ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုယ်ပိုင်န်ဆောင်မှုအတွက် 2008 ကတည်းကစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပြည်ထဲရေးဗိသုကာနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကျယ်ပြန်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ် အတွင်းဖြစ်သော နှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကိုပုဂ္ဂလိကအိမ်ရာများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနေရာများများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအထူးကုအသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းသင်တို့သည်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၏ဤရှည်လျားပင်ပန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့စီမံကိန်းများအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအိမ်များ ဂန္ခေတ်သစ်စတိုင်, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း Villasသင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့စိတ်ကြိုက်။ သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများ၏အတွင်းပိုင်းပတ်ပတ်လည်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအထူးပြုရှိခြင်း၏စိတ်ကူးကိုကြိုက်သည်မှန်လျှင်, အသင်း Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း စိတ်ကူးများနှင့်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ။ တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံတစ်တထောင်စကားများရကျိုးနပ်သည် - တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်သောကြောင့်အသက်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအရှုပ်ထွေးဆုံးအမှုပေးရ Created, Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းဓါတ်ပုံတွေထဲမှာအားလုံးပြောပါတယ်သောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံခက်ခဲလုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်အရာ, နှင့်တိုင်းအသေးစိတ်အပေါ်နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာ, ငါတို့သည်အလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားနိုင်သည်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုဟာအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အစုစုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများတွင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဗိသုကာအတတ်ပညာဘူခါရက်, Cluj, Constanta, Brasov, Pitesti, Timisoara, ဂလာတိနှင့်အတူတူသောမြို့, ပရိဘောဂဒီဇိုင်း, ဂန္အတွက်အိမ်များ, Villas နှင့်တိုက်ခန်းများများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအတွင်းပိုင်းအလှဆင်, ခေတ်မီစတိုင် အီတလီပရိဘောဂ နှင့်ဒီဇိုင်နာပိတ်ထည်။ ကျနော်တို့အယူအဆဖန်တီး အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း တစ်ဦးစတိုင်ဖော်ပြတစ်ဦးချင်းစီသည်စီမံကိန်းတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာကိုရှေးခယျြနိုငျသောသူတို့ကိုဖောက်သည်များ၏ထိပ်တန်းဦးစားပေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုနေရာဖြစ်သောဘဝတစ်လမ်းအားဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်။ ကျနော်တို့ကြော့ရှင်းနှင့်အတူနှစ်သိမ့်ပေါင်းစပ်ကြောင်းဇိမ်ခံအိမ်များများအတွက်ထူးခြားသောစီမံကိန်းများကိုဖန်တီးလို, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဖောက်သည်ဒီဇိုင်းအယူအဆ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုင်ရှင်လိုချင်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်စီမံကိန်း အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း ငါတို့အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးထူးခြားတဲ့နှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပိုင်ရှင်များအတွက်အထူးဖန်တီးနေတဲ့အယူအဆကိုဖော်ပြတဲ့အချို့သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့တွေ့ရှိခဲ့သောအယူအဆတစ်ခုအခြို့သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်ဆက်မပြတ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း brasov | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း Ploiesti | ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းဂလာတိ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း Braila | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း pitesti | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း Craiova | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း bucuresti |
အသင်းနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုအချိန်စာရင်း Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း
သင်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းတစ်ခုကုမ္ပဏီတခု၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုချင်ကြောင်းကောက်ချက်ချကြလျှင်နှင့် အတွင်းဖြစ်သော တစ်ဦးဿုံစနစ်တကျအာကာသနှင့်ကြော့ကိုဖန်တီးရန်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၌အကြှနျုပျတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဖန်တီးမှုကမ်းလှမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကို လူနေအိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွင်းပိုင်းသည်။ အထူးကု Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း သငျသညျစံပြအိမ်, တိုက်ခန်း, စားသောက်ဆိုင်, ကော်ဖီဆိုင်, ဆိုင်, ဟိုတယ်သို့မဟုတ်ရုံးသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ အဆိုပါမူကြမ်းရေးဆွဲအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုကျနော်တို့အကောင့်ထဲသို့ရည်ရွယ်ချက်များ, ဘတ်ဂျက်, သတ်မှတ်ရက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်ယူပါ။ ကျနော်တို့ပူးတွဲအဆင့်အားဖြင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်အချိန်စီမံကိန်းကိုက်ညီဖို့နည်းလမ်းတွေဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ် အတွင်းဖြစ်သော သင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်လုပ်ငန်းစဉ်၏စီမံကိန်းနှင့်ရရှိနိုင်၏ရှုပ်ထွေးပေါ် မူတည်. ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောပုံကြမ်းပြုပြင်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုတင်ပြအဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားခြားနားစတိုင်များ၏အကောင်းအဆိုး cons (ဂန္, ခေတ်သစ်, မြေထဲပင်လယ်, အမျိုးစုံရ, စကင်ဒီနေး) ရှင်းပြဖို့ရရှိနိုင်ပါသည် နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ကြိမ်, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများတွင်ပါရှိသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့ပစ္စည်းများ။ ငါတို့အဘို့အအသစ်တစ်ခုဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကိုဖန်တီးမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်, စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီကတိုက်ရိုက် 3d အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများတွင်ပါရှိသောအားလုံးပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်အောင်, အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ထပ်ခိုးကြမ်းပြင်နှင့်အတူ Villas ဂန္ထဝင်သို့မဟုတ်ခေတ်သစ်အိမ်များများအတွက်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကိုရေးဆွဲပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာများသာထို့နောက်အမှုကိုပြုမရနိုငျသောရိုးရှင်းသော image ကိုဖွစျလိမျ့မညျသောအတွင်းပိုင်း 3d ပုံရိပ်တွေပေးပါလိမ့်မယ်။ Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းနှင့်အလုပ်လုပ်, သင်အတွင်း၌အီတလီ, စပိန်, ဂျာမနီ, သြစတြီးယားသို့မဟုတ်ပြင်သစ်အနေဖြင့်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများထံမှကိုတင်သွင်းအတွင်းပိုင်းများအတွက်ကုန်ကြမ်းများဝယ်ယူမှတဆင့် 3d အမြင်နှင့်အညီလုပ်ရ။ ကြည့်ရန်စီမံကိန်းများ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအစုစုအိမ်များ.
ဗိသုကာဘူခါရက်စျေး | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစဉ်ဆက်မပြတ်စျေးနှုန်း | bucuresti အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစျေးနှုန်းများ | စျေးနှုန်းများ bucuresti အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအိမ်များဘူခါရက် | ဟိုတယ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း | ဘူခါရက်ရုံးဗိသုကာ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဆိုင်များ | အတွင်းပိုင်း bucuresti | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဆံပင်ညှပ်သမား | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများကို | အလှပြင်ဆိုင်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း | ကုမ္ပဏီများသည် bucuresti ဒီဇိုင်း | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများမှ bucuresti | Craiova အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစျေးနှုန်းများ | ဗိသုကာ Craiova စျေးနှုန်း | ဗိသုကာစဉ်ဆက်မပြတ်စျေးနှုန်း | ဗိသုကာ Cluj | ဗိသုကာ Ploiesti စျေးနှုန်း | Brasov ဗိသုကာပညာရှင်စျေးနှုန်းများ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းများ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစားသောက်ဆိုင် | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းခေတ်သစ်အိမ်များ | ဂန္အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအိမ်များ | အတွင်းပိုင်းစားသောက်ဆိုင် | Pitesti ဗိသုကာပညာရှင်စျေးနှုန်းများ | Braila ဗိသုကာပညာရှင်စျေးနှုန်းများ | ဂလာတိဗိသုကာပညာရှင်စျေးနှုန်းများ | ဟိုတယ်အခန်းအတွင်းပိုင်း | အတွင်းပိုင်းဗိသုကာကုမ္ပဏီများ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းများ | အတွင်းပိုင်းဗိသုကာ bucuresti | အတွင်းပိုင်းကုမ္ပဏီစဉ်ဆက်မပြတ် | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းတိုက်ခန်းများ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း villa | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအိမ်များ | စီးပွားဖြစ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစဉ်ဆက်မပြတ်စျေးနှုန်းများ | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစဉ်ဆက်မပြတ်စျေးနှုန်းများ | စဉ်ဆက်မပြတ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစဉ်ဆက်မပြတ်စျေးနှုန်း | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာ Timisoara စျေး | Cluj အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာစျေးနှုန်း | အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစတူဒီယို | | အိပ်ခန်းအီတလီ.
ထိတှေ့ Noble ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း
ဖုန်းနံပါတ် : 0720665365
E-mail ကို : nobilidesign [@] gmail.com
ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီတွေဟာ (ရုံးများ, ဟိုတယ်, Boutique, စားသောက်ဆိုင်, အလှပြင်ဆိုင်မင်္ဂလာဆောင်, ဘား, ဆံပင်ညှပ်သမား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း, အလှကုန်, သူငယ်တန်း, ဆေးရုံ, ဆိုင်, အရောင်းပြခန်း) rendering, ဗိသုကာ၏စီမံကိန်းများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, အတွင်းပိုင်း, အမြင်များ 3d နားလည်သဘောပေါက်။ သင်တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးနိုင်မည့်ရိုမေးနီးယားအားလုံးကိုခုနှင့်မြို့ကြီးများရှိစတုရန်းမီတာလျှင်3ယူရိုကနေစျေးနှုန်းလူနေအိမ်အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့အိမ်တော်အဘို့ 20D အတွက်အတွင်းပိုင်းများအတွက်စီမံကိန်းများကိုထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဇိုင်း, villa, တိုက်ခန်း, စတူဒီယို, ဂန္ခေတ်မီဒီဇိုင်း, မြေထဲပင်လယ်၏ကဏ္ဍ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားကုမ္ပဏီ Noble အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း: ဘူခါရက်, ကဏ္ဍ 3, ကဏ္ဍ 2, ကဏ္ဍ 4, 5, 6, Ilfov, Otopeni, Baneasa, Pipera, Constanta, Mangalia, Eforie Nord, Navodari, Mamaia Nord, Cernavoda, Medgidia, Pitesti, Arges, Giurgiu, Craiova, အာလေဇန္, Teleorman, Slatina, Targoviste, Calarasi, Ialomita, Urziceni, Slobozia, Fetesti, Braila, Tulcea, ဂလာတိ, Buzau, Ramnicu Sarat, Focsani, Vrancea, Piatra Neamt, Bacau, Barlad, Vaslui, Iasi, Suceava, Botosani ။
ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ် | ကြွေအုပ်ကြွပ်မော်ဒယ်များ | rectified ကြွေအုပ်ကြွပ် | အုပ်ကြွပ်အီတလီနိုင်ငံစျေး | အီတလီနိုင်ငံ tiled အတွင်းပိုင်း | အုပ်ကြွပ်ထုတ်လုပ်သူအီတလီ | Versace အုပ်ကြွပ် | tile ရေချိုးခန်းစျေး | ဇိမ်ခံရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ် | အပြင်ပန်းအုပ်ကြွပ်အီတလီနိုင်ငံစျေး | အုပ်ကြွပ်စျေးနှုန်း | အွန်လိုင်းအုပ်ကြွပ် | tile အိမ်သူအိမ်သား | rectified ကြွေအုပ်ကြွပ် | ရတဲ့အရာတွေကြွေအုပ်ကြွပ် | အတွင်းဖြစ်သော | အတွင်းပိုင်းရေချိုးခန်း | အသကျရှငျအစီအစဉ်.
https://www.crearesiteprezentare.info by © nobili-interior-design.ro | မြေပုံအညွှန်း | nobili-design.ro | nobili-design.com | https://blog.nobili-design.ro | https://mobila-italia.nobili-design.ro | nikydecor.ro | https://gresie-faianta.nobili-design.ro | constanta.nobili-interior-design.ro
ဤ site cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုကိုသဘောတူသည်။ Read more ...
ပေါ်လစီ cookies များကိုသုံးပါ
1 ။ ကွတ်ကီးပေါ်လစီကိုသုံးပါ
ဤမူဝါဒ nobili-interior-design.ro အားဖြင့် operated cookies နဲ့ web page များကိုရည်ညွှန်း
2 ။ ကွတ်ကီးဘာတွေလဲ?
အဆိုပါ cookie ကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်သူတစ်ဦးအသုံးပြုသူသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြားမိုဘိုင်း terminal ကိုသုံးစက်ကိရိယာများအပေါ်သိမ်းဆည်းထားမည်ကြောင်းအက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုပါဝင်သည်ဟုသေးငယ်တဲ့ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ cookie ကို (software ကိုဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်စပိုင်ဝဲဆံ့မသင့် hard ကားမောင်းသူအသုံးပြုသူအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များရယူမနိုင်) သည်ဘရောက်ဇာ (ဥပမာ Internet explorer, Chrome) မှ web server ကိုထုတ်ပေးတောင်းဆိုမှုကိုအားဖြင့် installed နှင့်လုံးဝ "passive" ဖြစ်ပါသည် ။
3 ။ cookies များကိုအဘယ်အရာကိုအသုံးပြုကြသလဲ
ဤဖိုင်များကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦး terminal ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေနှင့်အသုံးပြုသူဦးစားပေးဖို့အဆင်ပြေအောင်တစ်လမ်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ကွတ်ကီးအသုံးပြုသူများသည်သာယာသောအတွေ့အကြုံနဲ့ browsing များကိုအသုံးပြုသူနှစ်သိမ့်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုထောက်ပံ့: ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်အားဖွင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုသူတစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံဘယ်လိုနားလည်ကူညီအမည်မသိ, စုပေါင်းစာရင်းဇယားများ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြု အသုံးပြုသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းဖယ်ထုတ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သူတို့ရဲ့ contents တွေကို။
4 ။ ကြှနျုပျတို့ဘာ cookies များကိုအသုံးပြုကြတာလဲ?
ကျနော်တို့ cookies တွေကိုနှစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်သည်: session တစ်ခုနှုန်းနှင့် fixed ။ အဆုံးစွန်သောအဲဒီ session သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာ (web browser ကို) ပိတ်ပြီးမှအသုံးပြုသူရဲ့ terminal ထဲကျန်ကြွင်းသောယာယီဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ Fixed ဖိုင်တွေတစ် cookie ကို parameters တွေကိုကျော်အသုံးပြုသူရဲ့ Terminal ကိုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုသူဖျက်ပစ်သည်အထိရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
5 ။ ဘယ်လို cookies တွေကိုဒီ site ကအသုံးပြုနေကြသနည်း
ဒီ site သွားရောက်လည်ပတ် cookies များကိုရည်ရွယ်ချက်များနေရာဖြစ်နိုင်သည်:
ကွတ်ကီးစွမ်းဆောင်ရည် site ကို
Advertising ကြော်ငြာ cookies တွေကို
6 ။ ကွတ်ကီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာဆံ့?
ကွတ်ကီးသူတို့ကိုယ်သူတို့အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဘဲ, အသုံးပြုရရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်နှင့်ကြပါဘူး။ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုသာအသုံးပြုသူအချို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောဒေတာကြောင့်မဖြစ်နိုင်သူတို့ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့ကိုတစ်လမ်းအတွက် encrypt လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။
7 ။ ကွတ်ကီး
ယေဘုယျအားဖြင့် web စာမျက်နှာများတွင်ကြည့်ရှုအတှကျအသုံးပွုထားတဲ့ application ကိုသငျသညျကို default terminal ကိုအားဖြင့် cookies တွေကိုကယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အလိုအလျှောက် cookies တွေကို web browser ကိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခံရဖို့ဒါမှအဲဒီ settings တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည် cookies များကို terminal ကိုစလှေတျသို့မဟုတ်နေကြသည်အခါတိုင်းအသိပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် cookies များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို setup ကိုလျှောက်လွှာ (web browser) ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီးများကန့်သတ်အသုံးပြုမှုဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့ features တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
8 ။ အရေးကြီးသော cookies တွေကိုအင်တာနက်ကဘာတွေလဲ?
ကွတ်ကီးတစ်ခုစီကိုအသုံးပြုသူရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ဦးစားပေးလုပ်ဖို့ဖော်ရွေခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်တစ် browsing အတွက်အတွေ့အကြုံက generate ကူညီ, အင်တာနက်များ၏ထိရောက်စစ်ဆင်ရေး၏အာရုံဖြစ်ကြ၏။ ငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်း cookies များကိုတချို့က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုမရနိုငျပါစေနိုငျသညျ။
အပြုအမူ browsing အားဖြင့်သက်သေပေမယ့်အကောင့်သို့သင့်ရဲ့ဦးစားပေးများနှင့်အကျိုးစီးပွားယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ - ငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်း cookies များကိုသင်တို့သည်နောက်တဖန်အွန်လိုင်းကြော်ငြာခံရကြလတံ့ဟုမဆိုလိုပါ။
(အကောင့်တစ်ခုမှတဆင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှ authentication ကိုမလိုအပ်ပါဘူး) cookies များကိုအဓိကအသုံးပြုမှု၏ဥပမာ:
ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးအစား - အသုံးပြုသူဦးစားပေး လိုက်. အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။
စကားဝှက်တွေဆက်ပြီး - အသုံးပြုသူများသည် '' အကျိုးစီးပွားကိုက်ညီကမ်းလှမ်းမှု။
အင်တာနက်ကိုအကြောင်းအရာအပေါ်ကလေးများကာကွယ်ပေးရန် retention filter များ (မိသားစု option ကို mode ကိုကို Safe Search ကိုလည်ပတ်သော) ။
အကြိမ်ရေထုတ်လွှင့်ကြော်ငြာကန့်သတ် - တက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ကြော်ငြာ capping ။
တိုင်းတာခြင်း, optimization နှင့် analytics အင်္ဂါ - ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်မှအသွားအလာလူတယောက်အဆင့်ကိုအတည်ပြုအဖြစ်, အကြောင်းအရာ၏အဘယ်အရာကို type ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေသည်နှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး website တွင်ရောက်ရှိဘယ်လောက် (အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတိုက်ရိုက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားဖြင့်ဥပမာ စတာတွေ) ။ Website များကဤစမ်းသပ်မှုသည်အသုံးပြုသူများအကြိုးအတှကျသူတို့ရဲ့ဆိုဒ်များတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
9 ။ လုံခြုံရေးနှင့်လျှို့ဝှက်ကိစ္စများ
ကွတ်ကီးဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်! သူတို့ဟာအမျိုးအစားလွင်ပြင်စာသားကိုပုံစံများကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ကွပ်မျက်ခံရမရသို့မဟုတ် Auto-run ကိုမရနိုင်နိုင်အောင်ကုဒ်တဖဲ့နေဖန်ဆင်းတော်ရှိပါတယ်။ အကျိုးဆက်အားငါတဖန် run သို့မဟုတ်ပုံတူပွားဖို့ပွားများသို့မဟုတ်အခြားကွန်ရက်များပေါ်တွင်ပုံတူပွားလို့မရပါဘူး။ သူတို့ကဤလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူးသောကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမရပါ။
ကွတ်ကီးနေဆဲအနုတ်လက္ခဏာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဦးစားပေးများနှင့်စတိုးဆိုင်များအသုံးပြုသူများသည် '' browsing history အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့််ဆိုက်နှင့်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်နှစ်ဦးစလုံးကတည်းက cookies တွေကို Spyware တစ်ပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အတော်များများက Anti-spyware ထုတ်ကုန်ဤအချက်ကိုသတိပြုမိဖြစ်ကြပြီးအဆက်မပြတ်ဖယ်ရှားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ / စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ Anti-virus / Anti-spyware ပြီးဖျက်ခံရဖို့ cookies များကိုခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် browser များ, cookies များကိုများ၏လက်ခံမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ပေး privacy settings တွေကိုပေါင်းစည်းတရားဝင်မှုနှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအထူးသဖြင့် site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးအလိုအလျှောက်ဖျက်ပါပြီ။
ဝိသေသလက္ခဏာကာကွယ်မှုအလွန်တန်ဖိုးရှိသောသည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူ၏ညာဘက်သောကွောငျ့, ကမည်သည့်ပြဿနာမျှ cookies တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်သင်သိရသငျ့သညျ။ သူတို့ရဲ့အဆက်မပြတ် browser နဲ့က်ဘ်ဆိုက်အကြား Two-လမ်းသတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်မှတဆင့်သောကြောင့်တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူတစ်ဦးဒေတာထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း intervenes လျှင်, ကွတ်ကီးတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များကြားဖြတ်နိုင်ပါသည်။
ရှားပါးပေမယ့် browser ကိုစာဝှက်မထားတဲ့ကွန်ရက် (ဥပမာအနေနဲ့မလုံခြုံ Wi-Fi ကွန်ရက်) ကို အသုံးပြု. ဆာဗာချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်, ဒီဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
အခြားအ cookie ကို-based တိုက်ခိုက်မှု server များပေါ်တွင် cookies တွေကို၏မှားယွင်းတဲ့ setting ကိုပါဝငျသညျ။ website တစ်ခုသာ encrypted channel များကိုတိုက်ခိုက်သူများသုံးစွဲဖို့ browser ကိုမလိုအပ်ပါဘူးဆိုရင်မလုံခြုံလိုင်းများမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ဖို့ browser များလှည့်စားရန်ဤအားနည်းချက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ attackers ထို့နောက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်အခြို့သောဆိုဒ်များ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့၏အရှိဆုံးသင့်လျော်သောနည်းလမ်းရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်သတိထားပါရန်အရေးကြီးပါသည်။
သူတို့ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နီးပါးမလွှဲမရှောင်နေသောအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အကြီးဆုံးအသုံးပြုမှုကို cookies များကို, ၏အရှိဆုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်။ cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့က်ဘ်ဆိုက်များမှအသုံးပြုသူ access ကိုအများဆုံးကျယ်ပြန့် Youtube, Gmail, Yahoo နှင့်အခြားသူများအပါအဝင်အသုံးပြုသောခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒီနေရာတွင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲ browse ကြောင်းသေချာစေရန်အချို့သောအကြံပေးချက်များပေမယ် cookies တွေကိုသုံးပြီး:
သငျသညျ cookies တွေကိုသုံးပြီးလုံခြုံရေးတစ်ဦးအဆင်ပြေအဆင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ကွတ်ကီးနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ browser settings ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
သငျသညျ cookies တွေကိုစိတ်ထဲမထားပါဘူးသင်ကွန်ပျူတာအသုံးချဖို့နေသောတစ်ခုတည်းသောလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလျှင်, သင်ရေရှည်သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံး browsing history နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး access ကိုဒေတာသတ်မှတ်နိုင်သည်။
သင့်ကွန်ပျူတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမျှဝေလျှင်သင်တစ်ဦးချင်းစီကြည့်ရှုခြင်းသင် browser ကိုပိတ်လိုက်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ပယ်ဖျက်ဖို့သင့် browser setting ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဒီအက်ဘ်ဆိုက်များအရပ်ကို cookies များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပိုင်းကိုပိတ်ဖို့ browsing ဧည့်သည်များအနေဖြင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်ရန် option တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်နှင့်မွမ်းမံမှုများလိမ့်မည်အဆက်မပြတ် antispyware applications များ Install လုပ်ပါ။
စပိုင်ဝဲ၏ detection နဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏အတော်များများက applications များက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖော်ထုတ်မယ်တိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် browser ကိုအားနည်းချက်များ exploit နိုင်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုခြင်းမှ browser ကိုတားဆီး။
သင်သည်သင်၏ browser ကို updated စောင့်ရှောက်သောသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အတော်များများက cookies များကိုအခြေပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေ browser များ၏အဟောင်းဗားရှင်း၏အားနည်းချက်များကိုအသုံးချလုပ်နေကြသည်။
ကွတ်ကီးနေရာတိုင်းဖြစ်ကြပြီးသင်ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်ရှောင်ရှားမရနိုငျ - ဒေသခံသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာ။ သူတို့လည်ပတ်ပုံကိုတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှုနှင့်သူတို့ယူဆောင်လာအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူသင်စိတ်ချလက်ချကိုအင်တာနက်လမ်းညွှန်နိုငျသောလိုအပ်သောလုံခြုံရေးအစီအမံ ASTEL ယူနိုင်ပါတယ်။
ကို disable နှင့် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်အချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များသုံးစွဲဖို့မသွားနိုင်သောသို့မဟုတ်ခက်ခဲသွားရောက်ခဲ့ပြီးစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်သင်အွန်လိုင်းကြော်ငြာကိုတွေ့မြင် / မရကြလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ဒါဟာ cookies များကိုလက်ခံခဲ့သည်မည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ cookies များကိုလက်ခံရန်သင့် browser ကိုသတ်မှတ်နိုင်အောင် browser ကိုတင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျဖောက်သည်ပြန်ရောက် cookies များကိုအသုံးမပြုလျှင်ဒါပေမယ့်ဥပမာ, သငျသညျမှတ်ချက်များမချန်မထားနိုင်ပါ။
အားလုံးခေတ်သစ် browser များသင်သည်သင်၏ cookie ကို setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဲဒီ settings တွေကိုသင့် browser ၏ "ရွေးချယ်စရာ" menu ကိုသို့မဟုတ် "ဦးစားပေး" တွင်များသောအားဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
အဘယ်သူမျှမဥပဒေအရသိရသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အခမဲ့ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏လှုပ်ရှားမှု, ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးချင်းစီ၏ 677 / 2001 ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ယင်းအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ nobili-interior-design.ro, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအော်ပရေတာအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် privacy ကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုရည်မှတ် 506 / 2004, သတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာအတွက်အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့သာစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပေး။ အဆိုပါဒေတာကိုကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှင့် ဆက်စပ်. ၌အကြှနျုပျတို့၏ပူဇော်သက္ကာ၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့် (အီးမေးလ်, ဖက်စ်, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ) ထိုကဲ့သို့သောသင်ဆက်သွယ်အဖြစ်အော်ပရေတာများကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ရည်ရွယ်ချက်များဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, processing များအတွက်စုဆောင်းနေသည် ။ စာရင်းဖျက်ရန်နူးညံ့ပရိုမိုးရှင်းအသီးသီးအီးမေးလ်ထဲတွင်ပစ္စုပ္ပန်အတွက်မှာယူမှုဖျက် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အချိန်မရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒေတာကိုအော်ပရေတာအသုံးပြုရန်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်နှင့်သာအောက်ပါလက်ခံသူများမှထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါ: သင်၏အော်ပရေတာသို့မဟုတ်စာချုပ်စာတမ်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ traffic ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
nobili-interior-design.ro မှတဆင့်ကူးစက်သောအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုအထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုချေ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ဂီယာစဉ်နှင့်လက်ခံရရှိပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးကိုအပေါ်လွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာကိုကာကွယ်ပေးရန်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားသောစံချိန်စံညွှန်းကိုစောင့်ရှောက်မည်။ သို့သော်တစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်ပတ်ဝန်းကျင်၌သူတို့ကိုသိုလှောင်၏အင်တာနက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းကျော်ဒေတာထုတ်လွှင့်မရှိနည်းလမ်းလုံခြုံ 100% ဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို binding အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပုံစံများ၌သင်တို့၏ခရက်ဒစ်ကဒ်ဒေတာမဝင်နိုင်ဘူးပါ။